UI Engineer (Front-End Developer)
– Experience building web-pages using JS, CSS, HTML
– Experience building UIs powered by AJAX processes and implementation
– Understanding of the web application lifecycle, MVC and other design patterns
– Solid understanding of web, usability, & accessibility standards
– Prefer those with prior experience in Bootstrap, jQuery, ReactJS and AngularJS
– Must be willing to learn new technologies and methodologies.
– To contribute in the up and coming dynamic start-up company with its web properties.
– You will be trained to operate and manage web servers in the cloud and work with latest technologies and methodologies.
– To work together the CTO on design and development of new platforms and optimization of existing platform and applications
– To maintain, monitor and optimize the current platforms
– MVC ကို နားလည်ကျွမ်းကျင်သည့် Web Developer တစ်ယောက် ဖြစ်ရမည်။
– Web development ကို အနည်းဆုံး 1 year ခန့် လုပ်ခဲ့သည့် အလုပ်အကိုင် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
– Technology အသစ်များ၊ Methodology အသစ်များကို လိုအပ်ပါက သင်ယူနိုင်ရမည်။
– တက်သစ်စ Web service Start-up ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ပါဝင်ကာ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရမည်
– Web server များကို cloud ပေါ်တွင် operate လုပ်ရန်နှင့် manage လုပ်ရန်နှင့် နောက်ဆုံးပေါ် technology များ၊ methodology များနှင့် develop လုပ်နိုင်ရန် training များပေးသွားမည်
– ကုမ္ပဏီ၏ CTO နှင့်ပူးပေါင်းကာ platform အသစ်များ၊ ရှိပြီးသား platform များနှင့် application များအတွက် design နှင့် development များ ပြုလုပ်ရန် – ရှိပြီးသား platform များကို maintain လုပ်ရန်၊ optimize လုပ်ရန်
Salary တွင်သာမက performance review ပေါ်မူတည်၍ နှစ်စဉ် Bonus များလည်း ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
To apply: https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk0m1dc
Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. 634 total views, 8 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ